२ लाख कार्यकर्ता उतार्ने कस्तो छ एमाओवादी योजना? | कुवेतको पहिलो नेपाली अनलाईन पत्रिका
← डीभी/पीआरधारी कर्मचारीलाई कारबाही गर्ने ऐन राज्य व्यवस्था समितिबाट पारित
कुवेतमा अर्को नयाँ नेपाली संस्था नेपाल कुबेत युनिट संघ गठन । →
२ लाख कार्यकर्ता उतार्ने कस्तो छ एमाओवादी योजना?
काठमाडौं- एनेकपा माओवादी नेतृत्वको ३० दलीय मोर्चाले फागुन १६ गते काठमाडौंमा हुने आमसभामा २ लाख मानिस उतार्ने योजना बनाएको छ। मोर्चाले त्यसको लागि देश भरबाट कार्यकर्ता राजधानी ल्याउने तयारी समेत गरेको छ।
‘सबै जिल्लाबाट प्रतिनिधिमुलक सहभागिता हुन्छ’ एमाओवादीका पोलिटव्युरो सदस्य तथा स्वयमसेवक परिचालन समितिका संयोजक गंगा श्रेष्ठले भने, ‘२ लाख जनसमुदाय उतार्न र व्यवस्थित प्रदर्शनको लागि अन्तिम तयारीमा छौं’
संविधान निमार्णमा सत्तारुढ नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेलगायतका दल विगतका सहमति तोड्दै बहुमतीय प्रक्रियामा अघि बढेको भन्दै ३० दलीय मोर्चाले शनिबार दवाव मुलक सभा गर्न लागेको हो। उसले त्यसको तयारीकै क्रममा मंगलबार रोलकल मुलक लाठी जुलुस प्रर्दशन गरेको थियो।
१० हजार वाइसिएल परिचालन गर्ने
कार्यक्रम व्यवस्थित र शान्तपूर्ण बनाउने भन्दै १० हजार वाइसिएल परिचालन गर्ने भएको छ। वाइसिएलका अध्यक्ष गणेशमान पुनका अनुसार १० हजार वाइसिएल र उनिहरुको लागि १० हजार सहयोगी स्वयमसेवक परिचालन गरिने छ। कार्यक्रममा खटिने वाइसिएललाई रोलकल मुलक प्रशिक्षण दिइसकिएको पुनले बताए। ‘कार्यक्रमलाई शान्तिपूर्ण बनाउने ’bout उनिहरुलाई आवस्यक निर्देशन दिइसकिएको छ’ पुनले भने, ‘सभाको बीच बीचमा जनसमुदाय र अघिल्लो घेरमा उनिहरु परिचालन हुन्छन्’। सभामा आएकाहरुलाई उत्तेजित हुन नदिन वाइसिएलले भूमिका खेल्ने पुनले बताए। बाह्य हुनसक्ने सम्भावित घुसपैठ रोक्ने उनिहरुको अर्को काम हुने पुनले जानकारी दिए।
राजधानीका विभिन्न स्थानबाट नारा जुलुस गर्दै कार्यक्रममा सहभागि हुन ३० दलका कार्यकर्ता खुला मञ्च आउने छन्। कार्यक्रममा सहभागिताको लागि देश भरिबाटै कार्यकर्ता ल्याउने मोर्चाको तयारी छ। तर काठमाडौं उपत्यका र ताम्सिलिङ क्षेत्रबाट सहभागिता बढाउने तयारी रहेको श्रेष्ठले बताए। देशभरबाट प्रतिनिधिमुलक सहभागिता रहने उनको भनाई थियो।
एमाओवादी सहित ३० दलीय मोर्चाको कार्यक्रम भए पनि मानिस जम्मा पार्ने मुख्य जिम्मा एमाओवादीको भएको एक नेताले बताए। उनले भने ‘मोर्चाका सबै पार्टीको कार्यकर्ता ल्याउन सक्ने हैसियत छैन त्यसैले माओवादीले नै उतार्नु पर्छ।’
उनका अनुसार एमाओवादीले आफ्ना राज्य समितिलाई १० हजार मानिसल उतार्ने सम्मको कोटा छुट्याएको छ। राज्य समितिले जिल्ला समितिलाई त्यहि अनुसार कार्यकर्ता ल्याउन कोटानै छुट्याएको उनले बताए। राजधानीमा कार्यकर्ता उतार्न मधेसी दलका नेता अहिले जिल्लामा व्यस्त छन्। तमलोपाले सिराहाबाट १५ गाडी कार्यकर्ता ल्याउने तयारी गरेको नेता सुरेश मण्डलले जानकारी दिए। एमाओवादीपछि बढी मानिस राजधानी उतार्ने जिम्मा मधेसी दलकै भागमा परेको छ।
आन्दोलनका लागि १ जना सभासद बरावर २० हजारका दरले उठाउने मोर्चाले निर्णय गरेको थियो। मोर्चमा १ सय ४५ सभासद रहेका छन्। २० हजारका दरले उठाउँदा उनिहरुबाट २९ लाख प्राप्त हुन्छ। सभासदबाट प्राप्‍त हुने रकम मोर्चाले १६ गतेको सभाको तयारिको लागि खर्च गरेको एक सभासदले बताए।
३० दलीय मोर्चालाई सरकारको चेतावनी
सरकारले एमाओवादीले मंगलबार प्रदर्शन गरेको लाठी जुलुसप्रति गंभिर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ। गृहमन्त्रालयले बुधबार एक विज्ञप्ती जारी गरी लाठी जुलुसबाट प्रत्यक्ष रुपमा जनजीवन आतंकित भएको भन्दै आफ्नो ध्यानाकर्षण भएको जनाएको हो। ‘एमाओवादी नेतृत्वमा रहेको ३० दलीय मोर्चाले १२ गते काठमाडौंमा निकालेको जुलुसमा लाठीको प्रयोग भएको देखिएको छ,’ विज्ञप्तीमा भनिएको छ,’सो कार्यबाट प्रत्यक्ष रुपमा जनजीवन आतंकित भएको विषयप्रति मन्त्रालयको गंभिर ध्यानाकर्षण भएको छ।’
मन्त्रालयले जनप्रदर्शनको नाममा कानुन हातमा लिइ जनजीवन आतंकित पार्ने गैर कानुनी काम नगर्न अपिल गरेको छ। गैर कानुनी काम क्रियाकलाप गरेको पाइएमा कानुन बमोजिम कारवाही गर्ने मन्त्रालयले चेतानवी दिएको छ।
– See more at: http://www.nagariknews.com/main-story/story/33742.html#sthash.HA4H4xdF.dpuf